Macdanta King Sulaymaan (qaybta 18), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxa kaliya ee aan rabay inaan sameeyo waxay ahayd dambi. Waxaan u maleeyay ereyo xun oo waxaan doonayay inaan idhaahdo ... "Bill Hybels wuu dhammaaday wuuna xanaaqay. Hogaamiyaha caanka ah ee Christian wuxuu lahaa laba duulimaad oo uu dib ugu dhigay safarkiisa Chicago ilaa Los Angeles wuxuuna fadhiyey wadada safarka ee garoonka diyaaradaha muddo lix saacadood ah ka dibna la joojiyay duulimaadkiisa xiriirinta. Ugu dambayntiina wuu awooday inuu fuulo diyaaradda oo ku soo booday kursigiisii, shandadiisii ​​gacanta ayaa saaran dhabarkiisa sababtoo ah meel banaan oo ku taal qolka hoostiisa iyo kuraasta hoostiisa. Isla markii diyaaradda ay dhaqaaqday, wuxuu arkay haweenay albaabka ugu degdegeysa oo ku soo dhacaysa waddada. Waxay sidatay dhowr jawaan oo meel kasta aada, laakiin taasi waa ta ugu yar ee dhibaatooyinkeeda. Waxa xaaladdeeda ka sii xumaysay waxay ahayd xaqiiqda ah in hal il "bararsan" oo ay umuuqatay inayan akhrin karin lambarada kursi ee isha kale. Rakaabkii duulimaadka ayaan la arkin. Intii uu weli xanaaqay oo mashquul ku ahaa nafsaddiisa, ayuu Hybel Eebbe maqlay isaga oo dhegta ka shaahaynaya: “Billow, waan ogahay in maanta aysan fiicnayn. Waad seegtay oo sugayay duullimaadyo, saf ayaad ku istaagtay oo way nebcaatay. Laakiin hadda waxaad fursad u leedahay in maalinta ay fiicnaan doonto adoo soo kacaya oo naxariis u muujinaya naagtan quus taagan. Kuma qasbi doono inaad sameyso, laakiin waxaan u maleynayaa inaad si farxad leh aad ula yaabi doonto hadaad sidaas sameyso.
Qayb iga mid ah ayaa rabay inaan idhaahdo, "Xaqiiqdii maya! Ma dareemayo sidaas oo keliya. ”Laakiin cod kale ayaa yidhi,“ Waxaa laga yaabaa in dareennadaydu innaba xidhiidh la lahayn. Malaha waa inaan uun sameeyaa. ”Sidaa ayuu kor u kacay, oo wuxuu fuulay jaranjarada wuxuuna weydiiyey marwada haddii uu ka caawin karo inay hesho goobteeda. Markuu ogaaday inay ku hadasho luqadda Ingiriisiga oo keliya, wuxuu qaatay boorsooyinkeedii oo dhulka ku dhacay, wuxuu u horseeday fadhiisimadoodii, xirxiray shandadoodii, oo uu iska saaray jaakaddii, oo uu hubsaday in la xiray. Kolkaasuu ku noqday kursigiisii.
"Ma laga yaabaa inay waxyar ka yarahay sheeko ahaan?" Ayuu qoray. Markii aan fadhiistay kursigeyga, waxaa igu soo kacay hilib diiran oo farxad leh. Jahawareerka iyo xiisadda igu mashquulisay maalinta oo dhan mashquul ayaan bilaabay inuu baxo. Waxaan dareemay roob roob diiran oo ku maydha naftayda boodhka leh. Markii ugu horaysay 18 saacadood waan fiicanaaday.
Boqor Sulaymaan ereyadan wuxuu ka amaahday masawir laga soo qaatay Beeraha wuxuuna macno ahaan ka dhigan yahay in ku alla kii biyo ah isagana qudhiisa la waraabin lahaa. Wuxuu u maleynayay in tani ay noqon karto ku dhaqanka caadiga ah ee beeraleyda markii uu qorayay ereyadan. Xilliga roobka, marka wabiyahu ay gudbayaan, qaar ka mid ah beeraleyda oo beero ku dhow webiga qarkiisa ayaa biyuhu ku shubaan kaydadka waaweyn. Kadib, inta lagu guda jiro abaarta, beeralleygu iskii uma caawiyo derisyadooda aan haysan kayd biyood. Kadib wuxuu si taxaddar leh u furaa furayaasha wuxuuna ku hogaamiyaa biyaha nolosha siiya beeraha deriska. Haddii abaar kale dhacdo, beeralleydii is-jeclayd ayaa naftiisu yar ama bilaa biyuhu lahayn.Waxaa kale oo ay beeralleyda deriska ah ee iyagu dhistay kayd, waxay abaal marin doonaan saaxiibtinimadiisa markay biyo siiyaan waraabinta.
Maaha wax bixin wax si aad wax u hesho
Maahan wax ku saabsan ku-deeqidda $ 100 sidaa darteed Ilaahay wuxuu soo celiyaa isla lacagtii ama wax ka badan. Hadalkani ma sharraxayo waxa deeq-bixiyuhu helo (ma aha mid dhaqaale ahaan ama muuqaal ahaan ah) laakiin waxay la kulmaan wax ka qoto dheer farxadda jirka. Salomon wuxuu yiri: "Kuwa jecel inay wax wanaagsan sameeyaan waa la daali doonaa". Erayga Cibraaniga ah ee loo yaqaan 'sate / cun / barwaaqow' macnaheedu maahan lacag ama badeecad, laakiin waxay la micno tahay barwaaqo maskaxda, aqoonta iyo dareenka.
1 Boqorada waxaan ka akhrinay sheekada nebi Eliiyaah iyo carmal. Ilyaas wuxuu ka dhuumanayaa sharka boqorka Axaab, Ilaahna wuxuu ku baray inuu aado magaalada Tsarpat. Ilaah wuxuu ku yidhi, Carmal baan halkaas ku siiyey inay ku xannaaneeyo, Markii Eliiyaah magaaladii yimid, ayuu gartay naag carmal ah oo xaabo soo gura, oo biyo iyo kibis weyddiista. Waxay ku jawaabayaa waxa soo socda: Rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye: Waxba ma dubin, mooyee oo saliid muggeed moolal ah iyo saliid yar oo digsi ku jirto. Oo bal eeg, anigu waxaan soo qaatay alwaax qoryo ah ama laba ah oo gurigaan tegayaa oo waxaan doonayaa inaan diyaariyo aniga iyo wiilkayga aan cunno oo aan dhimanno. (1 Boqoradii 17,912: XNUMX).
Waxaa laga yaabaa in noloshu aad ugu adkayd carmalkii oo ay ka quusatay. Waxay ahayd wax jir ahaan macquul u ahayn iyada inay quudiso laba qof, oo ay iska daayaan saddex, iyada oo yar oo ay haysato.
Laakiin qoraalka ayaa sii socda:
Markaasaa Eliiyaah ku yidhi iyadii, Ha baqin! Tag oo yeel sidaad tidhi. Laakiin bal markii hore ii diyaarso wax ii macaan, oo ii soo bixi; Laakiin adiga iyo wiilkaaguba waa inaad mar uun wax dubtaan. Waayo, Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu leeyahay, Weelka dheryasameeyaha ma idlaan doono, oo saliidduna ma ay yaraan doonto ilaa maalinta Rabbigu dhulka roob ku soo daayo. Markaasay tagtay oo waxay yeeshay sidii Eliiyaah ku yidhi. Oo isna wax buu cunay iyada iyo wiilkeedaba maalinba maalinta ka dambaysa. Oo burkii dheryasameeyaha ma uu dhammayn, oo saliiddii saliidda ahaydna waxba kama ay helin sidii Eraygii Rabbiga ee uu kula hadlay Eliiyaah. Dherkeedii iyo saliiddii ku jirtay jarankeeda. Maahmaahyadii 1:17,13 wuxuu leeyahay "Naxariistu naftaada way kobcisaa" (Noloshu waa Kitaabka Quduuska ah). Ma aha oo kaliya "nafteeda" ayaa kobcisay, laakiin nolosheeda oo dhan. Waxay siisay wax yar oo yarna wuu sii kordhay.
Hadaanan fahmin casharka weli, waxaa jira dhowr aafo ka dib:
Mid ka mid ah gacmaha ayuu si badan u bixiyaa had iyo jeerna waa badan yahay; mid kalese waa madhalays meesha uusan isagu ahayn, oo haddana inuu miskiin noqdo (Maahmaahyadii 11,24:6,38). Rabbigeenna Ciise ayaa taas ku ogaaday markii uu yidhi: Sii, waa lagu siin doonaa. Buufis, culays, gariir iyo buuq badan ayaa lagaa dhex gelin doonaa dhabtaada; maxaa yeelay, mar kale ayaa laydinku qiyaasi doonaa qiyaastii aad qiyaastaan. ”(Lukos 2) Sidoo kale akhri 9,6 Korintos 15: XNUMX-XNUMX!
Xad u yeelo
Maahan wax ku saabsan qabashada camal wanaagsan marwalba. Waa inaan isku darno deeqsinimadeena iyo go'aankeena. Kama jawaab celin karno baahi kasta. Maahmaahyadii 3,27:XNUMX ayaa ina baraysa halkan: "Ha u diidin inaad wanaag u sameyso kuwa baahan haddii gacantaadu awooddo." Tani waxay muujineysaa in dadka qaar aysan u qalmin caawimaadeena. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah inay caajis yihiin oo ayna diyaar u ahayn inay mas'uul ka noqdaan noloshooda. Waxay ka faa'iideystaan ​​caawimaadda iyo deeqsinimada. Xad u deji hana diidin caawinta.
Waa maxay hibooyinka iyo hadiyadaha Eebbe kugu barakeeyey? Ma waxaad leedahay lacag kayar kuwa kale? Maxaad hadiyado ruuxi ah haysataa? Martigelinta? Dhiirigelinta? Maxaan ugu qancin laheen qof xoolaheena haysta? Ha noqon kayd biyo aad ku xajisan yihiin oo qarka u dhow. Waxaa nalagu barakeeyey inaan barakaysan nahay (1 Butros 3,9: XNUMX). Weydiiso Ilaah inuu ku tuso sida aad si daacad ah ugu gudbi karto wanaaggiisa oo aad u qalbi qabatid kuwa kale. Ma jiraa qof aad ku tusi karto deeqsinimo, naxariis, iyo naxariis toddobaadkan? Waxaa laga yaabaa inay tahay salaadda, ficillada, ereyada dhiirrigelinta, ama adoo qof u dhow Ciise. Laga yaabee inaad ku dirto emayl, fariin qoraal ah, taleefan, warqad ama booqasho.
Noqo kuwa ka shaqeeya sariirta webiga oo ha u oggolaado barakada nimcada Ilaah iyo wanaagiisa in ay ku wareeriyaan oo ka gudbi. Bixinta deeqsinimada waxay dadka kale baraysaa oo waxay naga dhigeysaa qayb ka mid ah Boqortooyadii Ilaah ee dhulka. Markaad la midoorto Ilaah si aad jacaylkiisa ugu gudubto, farxad iyo nabad ayaa noloshu ku dhex socon doontaa. Kuwa cusboonaysiiya kuwa kale ayaa naftooda qaboojin doona. Si kale haddii loo dhigo: Eebbe wuu u bakhtiiyey, waan ku bakhtiiyay, Ilaah wuxuu leeyahay qaadada ugu weyn.